Tuulo Talyaaniga Ku Taalla Oo U Dabbaal Degtay Ilmihii Ugu Horreeyey Ee Ku Dhasha Muddo 67 Sanadood Ah!!! - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Tuulo Talyaaniga Ku Taalla Oo U Dabbaal Degtay Ilmihii Ugu Horreeyey Ee...
Tuulo ku taalla wadanka Talyaaniga ayaa muddo ku siman 67 sanadood kadib markii ugu horraysay u dabbaal degtay dhalashada ilmo yar oo dadka deegaankaasi ku nool tiradiisa ka dhigaya 6 qof iyada oo ay mudada intaasi le’eg hore ugu noolaayeen tuuladan wax aan ka badnayn 5 qof oo dhammaantood wakhtigan waayeel ah. Toddobaadkii hore ayaa wiil yar oo magaciisa loogu wan qalay Francesco waxa uu ku dhashay tuuladaasi oo lagu magacaabo Lingorian oo ah tuulo ku dul taalla dhul taag oo muddo hore dad door ahi ku noolaan jireen balse imika laga haajiray oo aanay ku soo hadhin wax ka badan shan qof oo uu wiilkan yari ka dhigayo qofkii lixaad.
Wakaaladda wararka ee Talyaaniga oo warka arrintan la xidhiidha laga soo xiganayo ayaa sheegaysa in Francesco dunida yimid isaga oo qaylinaya markii uu sidaa u dhashayna ay dadkii ehehlkiisa ahaa aad u farxeen dhalashadiisana soo dhaweeyeen iyaga oo isugu bushaareeyey in wiilkan yari bushaaro u yahay in ay tuuladoodu noqon doonto mid cammiran oo dad badan yeelan doonta mustaqbalka soo socda. Sabrina iyo Rivera ayaa ah waalidka iska dhalay ilmahan yar, waxaanay wakaaladda warkan warinaysaa sheegaysaa in ay labadan lammaane muddo shan sano ka hor ah tuuladan soo dageen iyada oo ay halkaasi ku noolyihiin kaliya saddex qof oo beero falato ah kuwaasi oo wax ka beerta dhulka taagga ah ee tuuladani ku taallo.
Sabrina iyo Rivera oo ah lammaanahan wiilkan yar iska dhalay ayaa sheegaya in ay halkaasi u doorteen shan sano ka hor markii ay soo dageen in ay tahay meel bilicsan oo deegaan habboon ku taalla. Wakaaladdu waxa ay leedahay markii ay halkan labadan lammaane soo dageen waxa ay kula kulmeen saddex qof oo da’ ah. “Oday Iyo Laba Islaamood” kuwaasi oo ugu yaraan muddo dhawr iyo todobaatan sanadood ah halkaasi deganaa. Saddexdaa duq ayaa ka hadhay dadkii deegaankan ku noolaan jiray oo dhammaantood u guuray magaalooyinka waaweyn ee dalka Talyaaniga balse waxa ay saddexdan qof oo dhamaantood qoys kali ah ka soo jeedaa ku adkaysteen in aanay dhulka awawyaashood ka tagi doonin sidaasaanay mudadaasi qarniga ku dhaw ugu noolaayeen tuuladoodan wiilka yari ku dhashay. Sabrina iyo Rivera markii ay shan sano ka hor halkan soo dagayeen waxa ay go’aan ku gaadheen in ay ku tarmaan inta karaankooda ah si ay tafiirtoodu u soo noolayso tuuladan haawanaysa oo ay mar kale u yeelato ugu yaraan dad door ah oo cammira. Sabrina oo macalimad ka ah tuulo kale oo tuuladan ay degan yihiin jaar la ah una jirta illaa 7 Kiiloo Mitir ayaa saxaafadda u sheegtay in ay wiilkeeda yar ku faraxsan tahay haddii uu nasiibku isku simana uu isna halkaasi ku guursan doono oo ubad kale ku dhali doono.
Somaliland: Guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay Dacwad uu u gudbiyey Komishanka Doorashooyinka Qaranka
Breaking News: Al-Shabaab militants attack Somali military base near Ksmayo town
Somaliland: Foreign Minister receives Egypt Delegates